Alakụba nke Kiruna oge akara? | Apg29
Alakụba nke Kiruna oge akara?
Ọ bụ ala ọma jijiji kasị ukwuu edekọtara na Sweden.
Ala Ọma Jijiji na Sweden
N'abali a, enwere ala oma jijiji siri ike na Sweden. Egogogogogogogogogogogogogo ihe ya na 4.8. Ọ bụ ala ọma jijiji kasị ukwuu edekọtara na Sweden.
Ala ọma jijiji ahụ metụtara ọrụ a na-egwupụta ihe n'ime ala.
"N'ikwu okwu n'ozuzu, ọ na-akawanye njọ n'oké nkume ahụ ị na-agbadata. Ọ bụ nchọpụta anyị maara site n'akụkụ ụwa niile na ka ị ga-agbakwuba ụjọ ahụ," ka Björn Lund, ọkà mmụta seismologist, gwara Aftonbladet .
Ala ọma jijiji nke Kiruna ọ̀ bụ oge? Jizọs kwuru na Luk 21:11:
"A ga-enwe oke ala ọma jijiji n'otu ebe mgbe ụnwụ na ụnwụ na ntiwapụ ahụ.
Ọtụtụ ihe na-eme n'oge anyị ugbu a. Karịsịa ma a bịa n'ihe metụtara oria corona. Jizọs na-ekwukwa banyere ọrịa na-efe efe na onodu a.
Jizọs na-akpọta ndị kwere ekwe
Anyị na-ebi n'oge ikpeazụ ma n'oge ọ bụla Jizọs nwere ike ịkpọta ndị kwere na ya n'ụlọ. Ị dịla njikere? Received natara Jesus? You na-echekwa?
V 08, torsdag 25 februari 2021 kl 08:39